निशानका अपहरणकारीलाई डेराबाटै पक्राउ गरेको घरबेटीको बयान, प्रहरी किन भन्छ इन्काउन्टर ? – YesKathmandu.com
निशानका अपहरणकारीलाई डेराबाटै पक्राउ गरेको घरबेटीको बयान, प्रहरी किन भन्छ इन्काउन्टर ?
काठमाडौं । बालक निशान खड्कालाई अपहरण गरी हत्या गर्ने गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई प्रहरीले मुठभेठमा नभई घरबाट पक्राउ गरी इन्काउन्टर गरेको बयान भक्तपुरबासीले दिएका छन् । कांडाघारीका बालक निशानलाई अपहरी गरी फिरौति रकम नदिएपछि गोपाल र अजयले हत्या गरेको प्रहरीको ठहर गरेको छ । अपहरणकारी तथा हत्या अभियोगी गोपाल र अजयलाई भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो । दोहोरो फाइरिङ हुँदा उनीहरु मारिएको दावी प्रहरीले गर्दै आएको छ । तर गोपाल तामाङका घरबेटी श्याम लबटले भने प्रहरीको दावीलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । ‘प्रहरी उनीहरुबीच ध्याम्चेडाँडामा भएको होइन, मेरै घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो’ घरबेटी श्याम लबटले भने ‘घरबाट लिँदा पिट्दै लिएका थिए ।’
तर प्रहरीले भने ध्याम्चेडाँडामा उनीहरुले पहिले गोली चलाएपछि जवाफी कारवाही गरेको दावी गर्दै आएको छ । लवटमा भक्तपुर घरमा डेरा गरी गोपाल तामाङ बस्दै आएका थिए । सोमवार प्रहरीले गोपाल र अजयलाई त्यही घरबाट नियन्त्रणमा लिएका घरबेटी र स्थानीयले बताएका छन् । प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनीहरुलाई कठोररुपमा यातना समेत दिइएको थियो । त्यसपछि जंगलमा लगेर गोली हानेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
‘उनीहरुलाई पिट्दै लिन थालेपछि मैले सोधेको थिए, किन पिट्नु भयो र कहाँ लिन लाग्नुभयो, मलाई प्रहरीले भने हिजो बच्चा हराएको थियो त्यही केशमा लिन लागेको’ प्रहरीको भनाई उर्दत गर्दै लवटले भने । अपहरणकारीलाई इन्काउन्टर गरेको बिषय अहिले चर्चामा छ । अपहरणकारीलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गर्दा विरोध र समर्थन दुवै पाएको छ । तर प्रमाण नै नष्ट हुने गरी प्रहरीले इन्काउन्टर गर्दा निशानका परिवार क्षतिपूर्ति पाउनबाट भने बंचित भएका छन् ।